नेपालमा कोरोना संक्रमीत र निधन भएकाको विवरण ! (पछिल्लो अपडेट) | suryakhabar.com
Home ब्रेकिङ न्युज नेपालमा कोरोना संक्रमीत र निधन भएकाको विवरण ! (पछिल्लो अपडेट)
on: १८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १६:३२ In: ब्रेकिङ न्युजTags: No Comments
१८ जेठ, काठमाडौं । आज कोरोना पुष्टी ६४ जना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ६४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएको छ । आज १६६ जना भएका छन् ।
जम्मा संक्रमीतको संख्या १५६७ जना पुगेको छ । पुरुष १४५० छ भने महिला ११७ जना भक्एो स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पुष्टी गरेको छ ।
क्वारेन्टाईनमा रहेका दुल्लु नगरपालीकाका ३५ बर्षीया पुरुषको निधन भएको छ । २ बर्षीया बालीका बाजुराकीको बिहान २.३० बजे निधन भएको छ । देशभर कोभिडबाट मृत्यु हनुे ८ जना पुगेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले विभिन्न प्रयोगशालमा गरिएको परीक्षणमा १६६ जनामा सङ्क्रमण देखिएको बताए ।
कोभिड–१९ बाट आज थप दुईजनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले दैलेख र बाजुरामा एक एकजनाको मृत्यु भएको जानकारी दिए । योसँगै कोभिड–१९ को कारणले मृत्यु हुनेको सङ्ख्या आठ पुगेको छ । दैलेखका दुल्लू नगरपालिका–११ का ३५ वर्षीय पुरुष स्थानीय विद्युत् प्राधिकरणको क्यारेन्टिनमा बसेको मृत्यु भएको थियो । उनको स्वाब सङ्कलन गरेर रिपोर्टमा सङ्क्रमण देखिएको प्रवक्ता डा देवकोटाले जानकारी दिए । उनको हिजो निधन भएको थियो ।
यस्तै बाजुरा जिल्लामा पनि मृत्यु भएकी दुई वर्षीय बालिका पनि सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएको छ । बालिकामा ज्वरो, झाडाबान्ता र श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि बाजुरा अस्पतालमा भर्ना गरिएको उनले बताए । बालिकाको यही जेठ १६ गते स्वाब सङ्कलन गरेर सेती प्रादेशिक अस्पतालमा परीक्षणका क्रममा सङ्क्रमण देखिएको थियो । बालिकाको आजै बिहान २ः३० बजे निधन भएको थियो । उहाँका अनुसार बालिका गत जेठ १० गते आमाबुबासहित नेपाल आएकी थिइन् ।
१८ जेष्ठ २०७७, आईतवार १६:४८